घुमाएका कविता बुझ्न गाह्रो भयो, र बिक्न छाडे ! :: Kitab Kiro - Complete Book News
२०७४ कार्त्तिक १० गते नवराज पराजुली
- युवराज कटवाल
भानिन्छ जहाँ पुग्दैन रवी त्यहाँ पुग्दछ कवी । त्यसै क्षेत्रका एक चम्किला नक्षत्र हुन् युवा कवि नवराज पराजुली ।उनको पहिलो कविता सङ्ग्रह “सगरमाथाको गहिराई” केहि अघि प्रकाशित भएको छ । उनले यो कृतिकालागि यस वर्षको पद्मश्री साहित्य पुरस्कार पनि प्राप्त गरेका छन् ।
कुल ३६ वटा कविता सङ्रहित ‘सगरमाथाको गहिराई’मा माया, प्रेम र समाजका बिसङती प्रती तीखो व्यंग्य पाइन्छ ।
हाउभाउ सहितको कविता वाचनमा पोख्त पराजुली कविताको माध्यमबाट दर्शक वा श्रोतालाई आफ्नो कविताको गहिराइमा डुवाउन माहिर छन् । सगरमाथाको गहिराइलाई फाइन प्रिन्टले बजारमा ल्याएको हो।
पस्तुत छ पराजुली संग गरिएको सगरमाथाको गहिराई र उनको काब्य जीवन बारे कुराकानी ।
-तपाइको कविता संग्रहमा भएको ‘हेब्बी बर्थ डे’ कविता, जुन अत्यधिक रुचाइएको छ र त्यसको एउटा अंश संग्रहको पछिल्लो कलेवरमा राखिएको छ त्यसको रचना गर्भ बताइदिनुहोस न ।
यो चाहिँ धेरै चरणमा लेखिएको कविता हो। म काठमाडौं आइसकेपछिको मेरो जन्म दिन साथीहरुसंग रमाइलो भेटघाट भयो। त्यो दिन त्यतिकै रमाइलो संग बिताइयो। तर मैले गाउमा मेरि आमालाई फोन गर्न भुसुक्कै बिर्सिएछु। आमालाई फोन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले साँझमा मात्र सम्झिएँ । यो कुराले मलाई एकदम पिरोल्यो। खुसी बाड्न साथिहरु सम्झिए पनि मैले त्यो मान्छे बिर्सिएछु जसको कारण म धरतीमा छु। मैले कुनै साथिलाइ भेटेको छु, केहि गर्न सकेको छु, मेरो जन्मदिन मनाउन पाएको छु भने त्यो मेरी आमाको कारणले हो । त्यस दिन आमालाई बिर्सेको कुरोले नराम्ररी हिर्कायो । मैले आमालाइ बेलुकी फोन त गरे तर दुख लाग्यो भनिन।
मैले कबिता कुन दिन लेखे ठ्याक्कै याद छैन । तर त्यो दिन मलाइ मैले भोगेको त्यो पलले हिट गर्यो, जसलाई मैले मेरी आमाको नजरबाट उतारुं जस्तो भैरह्यो । मा आफैलाई सार्है भारी भयो । कबितामा कता कता आमाकै भावना पोख्न मन लाग्यो । हरेक मान्छे आफ्नो कुरा आफ्नो मन मिल्ने साथीलाई भन्न चाहान्छ नि मेरो लागि कविता पनि तेस्तै साथि भयो । पछि मैले फोन गर्न बिर्सिएको कुरा आफ्नै साथी (कविता)लाई सुनाउ सुनाउ भैरह्यो । यसरि हेब्बी बर्थ डे कविता जन्मियो ।
- साहित्य रचनाले मात्र पेट पाल्न सकिन्छ ? जीविका चलाउन अरु पनि केहि पेशा गर्नु हुन्छ ?
कविता लेख्छु, सुनाउछु भन्ने पनि आफ्नो एउटा प्रोफेसन नै हो । कविता लेख्नु सुनाउनु पनि जीविकोपार्जनसंग जोडीएको छ।
- धेरै कविहरु कविता लेख्न छाडी बिस्तारै उपन्यास लेखन तिर आउदैछ्न । तपाइको पनि त्यस्तो इच्छा छ ?
जब म आफुलाई लागेको कुरा कवितामा लेख्न सक्दिन, सायद त्यै दिन देखि म उपन्यास लेख्नेछु । जुन दिनसम्म त्यो कुरा कवितामा लेख्न सक्छु, त्यो दिनसम्म उपन्यास लेख्दिन। यसको मतलब मलाइ उपन्याससंग प्रेम छैन भनेको चाहिँ हैन। राम्रो उपन्यास पनि लामो कविता नै हो । जस्तै सगरमाथाको गहिराइ लामो उपन्यास हो । यहि लामो कुरालाइ मैले कवितामा लेखें । कवितामा लेख्न सकुन्जेल म कविता नै लेख्छु ।
-कविता संग्रह त्यति बिक्दैनन् यो कुरालाइ कतिको मान्नुहुन्छ ?
मान्छु, कविता एक समय बिकेनन् । त्यसो भनिरहदा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी बिक्री भएको मुना मदन कविता नै हो, गौरी पनि बिक्यो, त्यसपछि भुपी शेरचनको घुम्ने मेच माथी अन्धो मान्छे पनि कविता नै हो । गहिरिएर हेर्ने हो भने कविता नै बढी बिकेको छ नि । यस बिचमा राम्रा कविता आएनन भन्ने पनि होइन, तर के भयो भने, यो राजनिती संग पनि जोडियो । पंचायती ब्यबस्था आयो, कवि सर्जकहरुले पनि कुराहरु घुमाएर भन्नू पर्ने भयो । घुमाएको कविता बुझ्न गाह्रो भयो, र यस्ता कविताहरु बिक्न छाडे । बिस्तारै कविता सरल हुँदै गए । अहिले त धेर थोर कविता बिकिनै रहेका छ्न । कविता छोटो विधा हो । एकचोटी पढ्यो,सकियो । कसैले मनपरेको कविता पत्रीकामा छाप्यो । उसले कविता सङ्ग्रह किन्नु नै पर्दैन।
- तपाइले सबैभन्दा पहिलो कविता के लेख्नु भयो याद छ ?
याद छैन, जहाँसम्म लाग्छ टुक्रा-टुक्री केहि लेखें होला पहिलो कविता याद भएन । तर पहिलो पूर्ण कविता चै सगरमाथाको गहिराई हुनुपर्छ।
- सानै उमेरदेखि कविता लेख्न थाल्नु भएको हो ?
लेख्न त लेख्थे मुना मदन पढिसकेपछि, मुना मदन जस्तै लेख्छु भनेर मैले छोरी बुहारीको कथा झ्याउरे छन्दमा लेखेको थिए । कविता नै बुझेर लेख्न थालेको चै ५/६ बर्ष भयो ।
- नवराज पराजुली कवि नभएको भए आज कुन रुपमा हुन्थ्यो ?
कवि नभएको भए कलाकार हुन्थें। कलाकारिता गर्थें । तर अहिले कवि भएर पनि कलाकारिता गरिरहेकै छु ।
-हुन त आफ्ना सन्तान सबै प्यारा हुन्छन तर तपाइको कविता मध्ये तपाइलाई भित्रि मन देखि मन परेको कबिता कुन हो ?